Afaka ny hifidy sy hanampy olona Andriamanitra
"Fa izay te-hirehareha dia aoka hirehareha amin'izao: dia ny fahendreny sy ny fahalalany Ahy hoy Jehovah, izay manao famindrampo sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany fa izany no sitrako, hoy Jehovah." — Jer. 9:23.
Miasa araka ny fombany manokana ny Tompo, mba tsy hanandra-tena ny olona ka hirehareha amin'ny fahaizany, ary haka ny dera sy ny voninahitra ho azy ireo. Tian'Andriamanitra hahafantatra ny olona tsirairay fa ny fahaizany sy ny talentany dia avy amin'ny Tompo. Miasa amin'izay tiany hiasana Andriamanitra. Mifidy ireo izay tiany hanao ny asany Izy, tsy maka hevitra amin'ireo izay handefasany ny irany Izy ka hanontany hoe iza no tian'izy ireo na olona manao ahoana no tian'izy ireo hitondra ny hafatr' Andriamanitra ho azy ireo.
Hampiasa olona izay manaiky ampiasaina Andriamanitra. Hampiasa olona nahita fianarana Andriamanitra, raha mamela Azy izy ireo hamolavola sy hamboatra azy ireo, ary hijoro ho vavolombelona araka ny baikony irery ihany. Tsara kokoa raha ny olona ambony na ambany, nahita fianaranana na tsia, no hamela an'Andriamanitra hitantana sy hikarakara ny fiarovana ny sambofiarany. Mankato ny feon'Andriamanitra no asa tokony hataon'ny olona.
Na iza na iza no manana fifandraisana amin'ny asa sy fanompoana an' Andriamanitra dia tsy maintsy eo ambany fifehezan'Andriamanitra mandrakariva izy. "Fa izay to hirehareha dia aoka hirehareha amin'izao: dia ny fahendreny sy ny fahalalany Ahy hoy Jehovah, izay manao famindrampo sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin 'ny tany; fa izany no sitrako, hoy Jehovah." (...)
Misy fanahy noana ny mofon'ny fiainana, mangetaheta ny ranom-pamonjena; ary lozan'izay olona nitarika azy ireo mankany amin'ny lalan-diso noho ny soratra sy feo! Miantso ny olona ny Fanahin'Andriamanitra, maneho azy ireo ny adidy masina, dia ny mba hitia sy hanompo Azy amin'ny fo, fanahy, saina ary hery, hitia ny namany tahaka ny tenany. Miasa ao anaty lalina ny Fanahy Masina mandra-pahatonga azy ireo hahatsapa ny herin'Andriamanitra, ary fohazina hanao asa feno fanapahan-kevitra ny fahaizany ara-panahy rehetra. — RH, 12 May 1896.